Yenza Okulungileyo—Isifundo esisifunda kuYosiya | Fundisa Abantwana Bakho
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGrike IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKorea IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwedish IsiTagalog IsiTelugu IsiThai IsiTiv IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu isi-Igbo
Ngaba ucinga ukuba kunzima ukwenza into elungileyo? *— Ukuba uthi ewe, abantu abaninzi bayavumelana nawe. Nabantu abasele bekhulile bakufumanisa kunzima ukwenza into abayaziyo ukuba ilungile. Makhe siqwalasele isizathu sokuba kwakunzima kuYosiya ukwenza ukhetho oluhle. Ngaba uyamazi ukuba wayengubani?—
UYosiya wayengunyana ka-Amon ukumkani wakaYuda, owayeneminyaka eli-16 kuphela ukuzalwa kukaYosiya. UAmon wayesenza izinto ezimbi, efuz’ uyise, uKumkani uManase. UManase enyanisweni walawula ngenkohlakalo iminyaka emininzi. Kodwa wabanjwa ngama-Asiriya waza walibanjwa eBhabhiloni. Ngoxa wayebanjiwe, uManase wacela uxolo kuYehova, waza wamxolela.
Emva kokuba ekhululwe uManase, wabuyela eYerusalem waza waqalisa ukulawula njengokumkani kwakhona. Ngokukhawuleza walungisa zonke izinto eziphosakeleyo awayezenza waza wanceda abantu ukuba banqule uYehova. Kusenokuba waba buhlungu xa unyana wakhe uAmon engazange awulandele umzekelo wakhe omhle. Wazalwa malunga nelo xesha ke uYosiya. IBhayibhile ayithethi nto ngolwalamano lukaManase nomzukulwana wakhe uYosiya. Kodwa ngaba ucinga ukuba uManase wazama ukumnceda anqule uYehova?—
Xa uYosiya wayeneminyaka emithandathu, uManase wafa, yaye uyise, uAmon waba ngukumkani. UAmon walawula iminyaka emibini kuphela ngaphambi kokuba abakhonzi bakhe bambulale. Ngoko uYosiya waba ngukumkani wakwaYuda xa wayeneminyaka nje esibhozo ubudala. (2 Kronike, isahluko 33) Ucinga ukuba kwenzeka ntoni? Ingaba bethu uYosiya wakhetha ukulandela umzekelo ombi kayise uAmon, okanye umzekelo omhle kayisemkhulu uManase owayeguqukile?—
Nangona wayeselula, uYosiya wayesazi ukuba wayefuna ukunqula uYehova. Ngoko waphulaphula abo babemthanda uYehova, kungekhona abo babe ngabahlobo bakaYise. UYosiya wayeneminyaka esibhozo kuphela, kodwa wayesazi ukuba wayefanele aphulaphule abantu abamthandayo uThixo. (2 Kronike 34:1, 2) Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yayingoobani ababe cebisa uYosiya yaye bemmisela umzekelo omhle?—
Umprofeti uZefaniya wayenempebelelo entle kuYosiya. Wayengumzala kaYosiya, mhlawumbi wayekwangumzukulwana katata kaManase ukumkani uHezekiya owayelungile. Ngoxa wayesandul’ ukulawula njengokumkani, uZefaniya wabhala incwadi yeBhayibhile ethiywe ngaye. UZefaniya walumkisa ngezinto ezimbi ezaziya kwehlela abo babengafuni ukwenza okulungileyo, ibe kucace mhlophe ukuba uYosiya wasithobela eso silumkiso.
Kwakukho noYeremiya, ekunokwenzeka ukuba wawukhe weva ngaye. Njengabafana uYeremiya noYosiya bakhula kunye. UYehova waphefumlela uYeremiya ukuba abhale incwadi yeBhayibhile ethiywe ngaye. Emva kokufa kukaYosiya uYeremiya wabhala ingoma echaza indlela awayebuhlungu ngayo. (2 Kronike 35:25) Khawucinge nje ngendlela abamele ukuba babekhuthazana ngayo ukuba bahlale bethembekile kuYehova!
Bamele ukuba uZefaniya noYeremiya bamnceda njani uYosiya wenza okulungileyo?
Yintoni ocinga ukuba sinokuyifunda kuYisoya?— Ukuba nawe ufana naye, utata wakho akamnquli uYehova, ngaba ukho omnye umntu onokukunceda ufunde ngoThixo? Mhlawumbi ngumama wakho, utatomkhulu okanye nabani na ozalana naye. Mhlawumbi ngomnye umntu okhonza uYehova, okanye omnye umama wakho asenokuvuma ukuba afunde nawe iBhayibhile.
Nokuba imeko yayinjani, nangona uYosiya wayemncinane, wayekhule ngokwaneleyo ukuba akwazi ukuzenzela abahlobo nabantu abanqula uYehova. Ngamana ungenza njengaye uze nawe ukhethe ukwenza okulungileyo!
^ isiqe. 3 Ukuba ufunda nomntwana, esi sikhewu siyakukhumbuza ukuba unqumame uze ukhuthaze umntwana ukuba agqabaze.
Yayingubani utata notat’omkhulu kaYosiya, yaye babengabantu abanjani?
Utat’omkhulu kaYosiya wenza luphi utshintsho kubomi bakhe?
Yayingobani amagama abaprofeti ababini ekusenokwenzeka ukuba bamnceda uYosiya, yaye ucinga ukuba kutheni kubalulekile ukuba nabahlobo abanjengabo?